Kachin Duwa: မြန်မာပြည်မှာ တကယ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ ဘာသာရေးမဟုတ်၊ အစွန်းမရောက်တဲ့ ဘာသာတရားသာ လိုတယ်။
Posted by Du Wa at 3:22 PM
ဟုတ်ပါတယ်.... Face book မှာ Share ထားကြတာတွေ.လို.
စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ. ချင်းပြည်မှာ သာသနာလာပြုတဲ. ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးတွေလည်း
အိမ်ရှင်တွေကို လေးစားကြပါလို. ကွန်မန်.ပြန်ရေးခဲ.တာ.... စစ်အစိုးရပြီးရင်
ဘုန်းကြီးတွေပါဝါပြတာကိုအခံရဆုံးပဲ ချင်းပြည်မှာ.... မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ချင်းပြည်နယ်ကိုလည်း ခရစ်ယာန်
ပြည်နယ်လို. သတ်မှတ်မှ မျှတမှုရှိမှာပေါ. ဟုတ်ဘူးလား .... :)